स्ट्रिङ ट्रिमर लाइन के बनेको हो?-Ningbo Judin Special Monofilament Co.,Ltd
स्ट्रिङ ट्रिमर लाइन के बनेको छ?
समय: 2021-12-03 हिट्स: 9
स्ट्रिङ ट्रिमरमा काट्ने लाइनले कडा सामा र घाँसहरू काटेर सबै कडा परिश्रम गर्छ। यो ट्रिमर लाइन घाँस काट्न पर्याप्त कडा छ, तर चट्टान, धातु र फेंस पोस्टहरू जस्ता कडा वस्तुहरू विरुद्ध तोड्न पर्याप्त नरम छ। ट्रिमर लाइन निर्माताहरूले धेरै फरक सामग्रीहरूबाट यो काट्ने लाइन बनाउँछन्।
आधारभूत ट्रिमर लाइन
अधिकांश ट्रिमरहरू उद्योग-मानक काट्ने लाइनसँग काम गर्छन्। यो रेखा प्रायः कडा, मोनोफिलामेन्ट नायलॉन लाइनबाट बनाइन्छ। यी काट्ने लाइनहरू व्यासमा दायरा हुन्छन्, जसले तपाईंलाई लाइनहरू कति टिकाउ छन् भनेर बताउँछ; रेखा जति गाढा हुन्छ, त्यति नै कम भाँचिन्छ। यद्यपि, बाक्लो रेखाले घाँस र झारपातहरू काट्नको लागि पर्याप्त छिटो गतिमा टाउको घुमाउन थप इन्जिन पावर चाहिन्छ।
प्रबलित काटन लाइन
धेरै ट्रिमर निर्माताहरूले पनि एक नायलॉन ट्रिमर बनाउँदछ जुन केहि अन्य प्रकारको सामग्री संग प्रबलित छ। अन्य नायलन लाइनहरू सजिलैसँग तोड्नबाट रोक्नको लागि आन्तरिक रूपमा बलियो बनाइन्छ। कहिलेकाहीँ, ट्रिमर निर्माताहरूले बाहिरी नायलॉन सामग्रीलाई बलियो बनाउनको लागि नायलन लाइनमा थोरै मात्रामा एल्युमिनियम मोल्ड गर्नेछन्। अन्य लाइन निर्माताहरूले तिनीहरूको काट्ने लाइनलाई सुदृढ गर्न कम्पोजिट नायलन सामग्रीहरू प्रयोग गर्नेछन्। अर्को विकल्पले थप सुदृढीकरणको लागि नायलनमा थपिएको बहुलक प्रयोग गर्दछ।
ट्रिमर लाइन शैलीहरू
ट्रिमर लाइन पनि विभिन्न काट्ने उद्देश्यका लागि विभिन्न आकारहरूमा आउँछ। सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको आकार गोलो हो, जुन भाँच्न कम प्रतिरोधी छ; यद्यपि, यसले घाँसलाई अझ बढी आँसु दिन्छ, यसलाई अझ नराम्रो देखिने फिनिश दिन्छ। अन्य आकारहरूमा वर्ग, हीरा र छ-पक्षीय रेखाहरू समावेश छन्, जसमा सबै किनारहरू छन् जुन गोल रेखा भन्दा तीखो काट्छन्। किनाराहरू भएको ट्रिमर रेखा गोलो रेखाहरू भन्दा बढी कडा रूपमा काट्न जान्छ, तर यसले कडा सतहहरू विरुद्ध धेरै पटक तोड्छ।
अघिल्लो: मेरी क्रिसमस र नयाँ वर्षको शुभकामना!
अर्को: किन प्लास्टिक बलिङ तार छनोट?